Ngokusetyenziswa okufanelekileyo, iioli eziyimfuneko zigcina isimo sengqondo somntu, sivuselele iimvakalelo ezintle, sivuselele amandla omzimba wokuziphilisa, ukwandisa umkhuhlane, ukususa iimveliso ezinokuxilongwa, ukuphucula ukujikeleza kwegazi. Ziziphi iindlela zokusebenzisa ii-oyile ezibalulekileyo?
Amafutha abalulekileyo angasetyenzwa ngeendlela ezimbini: ngesikhumba esikhatywayo okanye ngephepha lokuphefumula. Ngesikhumba, amafutha abalulekileyo angena emzimbeni ngokusebenzisa ukusikwa, ukuhlamba, ukuxineka, kunye nokuphefumula ngokuphefumula nokukhuphuka.
I-cold inhalation enye yeendlela ezilula zokusebenzisa amafutha abalulekileyo. Kubalulekile ukubeka amaconsi amancinci eoli efunekayo kwisiqwenga seesiski (i-handkerchief) kwaye ahlambe ummhozo we-5-10 imizuzu. Le ndlela yinto enhle kakhulu ngenxa yeentloko kunye namaqanda. Ukuze ulale kakuhle, faka ingcezu yengubo emlanjeni ebusuku, ukugubha phezu kwayo iitropu zeoli kunye nokuphumula okanye ukuphucula.
Ukunyuka kwe-steam kulungele ukonyango kwezifo zokuphefumula. Ukufuduleka komnxeba, engeza 4-6 amaconsi eoli kwisitya esitshisa (kodwa ngokungekho nto ebilisayo) amanzi, uze usigubungele intloko kunye nezitya ngeelayile, vala amehlo akho uze uqhube umzuzu ongama-5-10. Le ndlela isebenzisa iioli ze-angelica, i-eucalyptus, umthi wetiyi, i-myrtle, i-sage, ipineyini, i-lemon, umjunipha, i-thyme, i-chamomile, imisedare.
Ukuze uphilise ubanda, xuba amaconsi ambalwa wepine, i-eucalyptus kunye neoli yemononi. Ukuba ufuna ukusebenzisa le ndlela ngasentla njengobhavu wombane ebusweni, i-oil tree okanye i-lemon inceda ukucoca ulusu uze uvule i-pores.
Ukunyuswa kwe-Steam kungathathwa kwi-sauna. Ukwenza oku, kufuneka ufeze iindonga zegumbi le-steam okanye amalahle ngesisombululo sepine okanye i-eucalyptus. Kodwa khumbula, iindlela zokusebenzisa ioli zichazwe kwi-asthmatics.
Ukuncitshiswa kwemoya egumbini.
Ukuzalisa igumbi ngefumba, ungasebenzisa indlela yokukhuphuka. Ukongezelela ekuboneleleni ngempembelelo yokwelapha, kuyindlela enhle yokuhlambulula umoya kwigumbi kwaye uphinde uxoshe inambuzane. Enye yeendlela eziqhelekileyo zokuncedisa umoya kwipropati zibanezibane eziqholiweyo. Ngokuqhelekileyo zenziwe ngeglasi, i-ceramics okanye i-marble. Kwi-aromalamp, umxube wamanzi kunye namafutha amaninzi (malunga nama-10 amaconsi, inani lawo lixhomekeke kubukhulu begumbi) litshiswa kwi-tank evaporator, kwaye i-oyile ngeli xesha ihamba ngokuthe ngcembe emoyeni. I-Aromalamp kufuneka isetyenziswe ngomnyango uvaliwe kunye neefestile iiyure eziyi-1-3.
Isixhobo sokutshiza ioli efunekayo emoyeni ibizwa ngokuba ngumsasazo . Le ngenye yezindlela ezichanekileyo zokusebenzisa ioli. Umsasazo uguqula ioli kwi microparticles, eziza kugcinwa ixesha elide emoyeni kwindawo esamisiweyo. I-microparticles iyakwazi ukungenelela emiphakeni kwaye ngoko ibe nempembelelo yonyango. Ixesha lokuphalala lisuka kumzuzu ukuya ku-30.
Yenza i-aromatize emoyeni kwindlu kwaye inokufuthwa . Ukwenza oku, kwi-tablespoon ye-vodka okanye utywala ococekileyo, qhafaza malunga nama-10 amancinci yeoli, gubha kakuhle, uthele umxube kwi-spray uze uphefeze egumbini.
Ungaphinda ungeze amaconsi ambalwa oyile ozithandayo kwi- humidifier okanye kwisitya encinci samanzi uze usibeke kwibhetri.
Ukuvumba umoya emoyeni, ungasebenzisa ikhandlela ezikhethekileyo. Ezi zikhandlela zithengiswa, kodwa unokuzenza. Ukwenza oku, khanyisa ikhandlela, linda malunga nemizuzu emi-5, uze ucime. Kwi-wax edibeneyo, sebenzisa i-1 ye-oyile ebalulekileyo, uze ukhanyise ikhandlela kwakhona. Ukuvumba akuyi kuhlala ixesha elide, kwaye umphumo wonyango unokunciphisa kakhulu, ngenxa yokuba ubushushu obuphezulu, ezinye izinto zeoli zichithwa. Amafutha abalulekileyo afuthayo, ngoko uqaphele kakhulu.
Ukungena kweoli efunekayo ngesikhumba kwiprogram yokuncedisa kuncedwa ngokusikwa. Ioyile ebalulekileyo yokusilalisa ixutywe kunye nesiseko, umzekelo, jojoba, i-almond, ioli yekakhukhunathi. Ngako-ke ilanga lombondi, ingqolowa, ibhotela. Kwama-10 amaconsi e-base, ama-3-5 amachiza amafutha abalulekileyo kufuneka afakwe. Ukuba uthengela ukuxutywa okwenziweyo okwenziwe ngamafutha aklanyelwe ukuhlamba, ukusilalisa okanye ukuvumba komsindo, ngoko akudingeki ukuba ihlanjululwe. Ukuphucula ukujikelezwa kwegazi kunye nokuphucula izihlunu ezibalulekileyo iioli, i-rosemary, i-cinamon, i-lavender, i-birch, i-juniper, ipineyini. Isiphumo sokuphumla sinamafutha e-bergamot, i roses, i-chamomile, i-lavender, i-mimosa, i-geranium, i-balm, imisedare, i-neroli, i-orange, i-sandalwood kunye ne-mandarin. Ukuxilisa umzimba, iirasi, i-jasmine, i-sinamoni, i-ylang-ylang, iris kunye ne-sandalwood zifanelekileyo.
Indlela yokwenza ioli kwesikhumba iyafana nokuhlalisa. Zingasetyenziselwa imihla ngemihla ukunyusa ulusu. Umxholo weoli efunekayo kumxube ngeoli ephantsi ebusweni kufuneka ibe yi-1%, kuba umzimba-3%. Ikhumba elivuthiweyo nelomileyo, ioli ye-neroli, iilesi zifanelekileyo; uhlobo olushushu lwe-isikhumba - i-bergamot.
Ibhethi yindlela elula kakhulu kunye nelula yokusebenzisa ioli efunekayo. Xa uhlamba ngokugcwele, gxobhoza amaconsi ama-7 eoli efunekayo, ngaphambi kokuyihlamba kwiglasi yekhilimu okanye ubisi okanye kwisipuni sethuphu seoli, okanye kwi-foam yokuhlamba; ukwenzela ukuba i-steam ayibaleki, vala umnyango, kwaye uhlambe malunga nemizuzu engama-15. Ukuphucula iimoya, ungasebenzisa ioli ye-sandalwood okanye i-ylang-ylang. Ukuzola kwaye ulale kakuhle, sebenzisa i-chamomile okanye i-lavender oil. Impembelelo ekhuthazayo iya kuba neoli ye-rosemary, ipine okanye i-neroli.
Ukusuka ekukhatyweni kweenyawo kuncedo kakhulu ekuhlambeleleni ngamafutha e-rosemary, i-peppermint, i-lavender (4-5 amanconsi ngamanzi ngamanzi).
Ukuxinwa kwamafutha kusebenza kakhulu ekunciphiseni ukuvuvukala kunye nentlungu. Ngenxa yentlungu, i-arthritis kunye ne-rheumatism, ukunyanzeliswa okutshisayo kuncedo, kunye neentambo ezinwebekileyo kunye nokuvuvukala-i-compress. Ukwenza i-compress hot, ama-4-5 amaconsi yeoli kufuneka anqunywe kwindebe yamanzi ashushu. Yenza umxube wendwangu, unyuse umthamo ogqithiseleyo kwaye usetyenzise kwiindawo ezibuhlungu, de kube i-compress ikhulile. Emva koko phinda inkqubo. Ukuze ulungiselele i-compress ebandayo, endaweni yamanzi atshisayo kufuneka usebenzise ifayo ebandayo.
Uncedo lokuqala kunye nexhefu elilumkileyo
Ukuqhaqha kwiinkipi ngexesha lokuncelisa
Izakhiwo zemithi kunye nokusetyenziswa kwepropolis
Iimfihlelo zempilweni yempilo ebhinqa
Biography ka Natalia Krachkovskaya
Isaladi kwi-salmon encinci
I-orgasm yesifazana: ngaba kufuneka ndilinde amacebo avela kwendalo?
Ungazikhohlisi malunga ne-foamy disco
Izakhiwo zonyango zengca zomalusi
Isobho se-mushroom elimhlophe
Iipropathi zokuphilisa iwayini elomileyo
Ukusondeza nokusondeza abantwana